Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Ngaba akukho Ndlu? Akukho zinkonzo? Yenza uhambo olukhulu kwakhona!
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Utyalo mali • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi namhlanje ithumele iphepha lokumisa kwaye yaxwayisa ukuba iinkonzo zokusika ziyakucothisa okanye ziyeke ukwakhiwa ngokukhawuleza okufunekayo kweshishini lokhenketho.
Uthungelwano lweHlabathi lezoKhenketho luyaqonda ukuba kubudala beCovid, iinqwelomoya, ezinye iivenkile zokutyela kunye neehotele kuye kwafuneka zinciphise iinkonzo ukuze baphile.
Ngelishwa, ngeli xesha, sikubonile ukuhla kwehlabathi kumgangatho wemveliso yezokhenketho enikwa uluntu.
Kwiposi le-COVID-19 eli linokuthetha ukuba umtsalane wokuhamba uyasuswa inyathelo ngenyathelo, okwenza ukuba kube nzima ukubuyela kwakhona.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi ikhuthaza iinkokheli zeshishini ukuba zenze uhambo lube mnandi, lube mnandi kwaye lube nomtsalane kwakhona.
Ukunciphisa ukugcinwa kwekhaya nokungaboneleli ngezinye iinkonzo zokonga iindleko kuya kunciphisa okanye kuyeke ukwakhiwa kwakhona kweshishini lethu lokuhamba nokhenketho.
Abo baya kutsala iindwendwe ngoncumo kunye neenkonzo ezintle ziya kuba ngabaphumeleleyo.
Ukuhamba kufuneka kube kuhle kwakhona!
”Umhlaba kuyakufuneka ubekhona kunye ne-COVID-19. Ithuba lokubuyisa uhambo nokhenketho libuyele kumanqanaba ka-2019 kwaye lenze ukuba kungabikho mnandi, kumnandi, okanye kubunewunewu bokuthatha uhambo alunamsebenzi ”utshilo uJuergen Steinmetz, uSihlalo we-World Tourism Network.
”Abo baphucula kwaye banganciphisi iinkonzo baya kuba ngabaphumeleleyo. Amanyathelo okusika imali aya kungqinelana neziphumo zokusika kweshishini.
"Sikhuthaza iihotele ukuba ziqhubeke nokugcina izindlu, zigcina iivenkile zokutyela kunye nemivalo, kwaye ungalibali ukwala iinkonzo uncumile!"
I-WTN ifuna ukukhuthaza abachaphazelekayo ukuba basebenze kuyo Ukuvuselela ukhenketho kwihlabathi ngethemba emva komhlaba. Abahambi bafuna ukuncitshiswa, ukuhamba kufanele kube kokonwaba, kungabi noxinzelelo, kwaye kubonelele ngeenkonzo ongazifumaniyo xa uhlala ekhaya.
Yenza uhambo olukhulu kwakhona:
Buyisela igumbi lokucoca rhoqo kunye nokutshintsha izinto zokulala kwiihotele nakwindawo ekuchithelwa kuzo iiholide.
Ukuphucula inkonzo efumaneka kwiinqwelomoya kunye nokuphelisa intlawulo ezininzi.
Ukuphuhlisa iiyure ezisebenziseka lula kubahambi.
Ungazami ukuba zizinto zonke kubo bonke abantu.
Uthungelwano lwezoKhenketho lweHlabathi, uGqirha Peter Tarlow uthumele oku kulandelayo kwiphepha lokuma Kwiwebhusayithi yeWTN.
Ngelishwa, ngeli xesha, sikubonile ukuhla kwehlabathi kumgangatho wemveliso yezokhenketho enikwa uluntu. Ngokuqinisekileyo, esinye sezizathu zokuhla kwesi sifo ibubhubhani. Ubhubhane akunakuba kuphela kwesizathu sokuhla. Abaqwalaseli abanonophele bendawo yokuhamba nokhenketho bebesele beqwalasele ukuqala kokuhla kwangaphambi kobhubhane kwaye oku kwehla komgangatho wenkonzo ekuhambeni kwexesha kuya kulonakalisa ishishini lezokhenketho.
Izizathu ezichaziweyo zokuhla kumgangatho wenkonzo yabathengi ukusuka kwixabiso eliphezulu lepetroli ukuya kubuthathaka kuqoqosho kumazwe amaninzi asentshona. Nangona ezi zizathu zisemthethweni kwaye ziyinyani, zinika kuphela inxenye yebali. Ngaphaya koko, ngokwembono yeshishini lokhenketho, zizizathu nje: izinto ezenzeka kushishino. Ukuba ishishini lokhenketho nokhenketho liza kuphumelela kula maxesha anzima, kufuneka lenze okungaphezulu kokuzibona nje njengexhoba loqoqosho okanye ububi babanye abantu kufuneka luzivavanye ukuze lubone ukuba nalo lingaphucula phi.
Mhlawumbi isoyikiso esikhulu kushishino lokuzonwabisa (kwaye ukuya kuthi ga kwinqanaba elincinci kwishishini lokuhamba kweshishini) yinto yokuba uhambo lwalulahlekelwe yinto elungileyo yothando kunye nobugqi. Ekukhawulezeni kwayo ukusebenza kakuhle kunye nohlalutyo lobungakanani, ishishini lokuhamba kunye nokhenketho lisenokuba lilibale ukuba umhambi ngamnye umele ilizwe kuye, kwaye umgangatho kufuneka usoloko ungaphaya kobungakanani.
Ngokukodwa kushishino lokuhamba lokuzonwabisa, oku kungabikho komlingo kuthethe ukuba zimbalwa kwaye zimbalwa izizathu zokufuna ukuhamba kunye nokuthatha inxaxheba kumava okhenketho.
Buyisela igumbi lokucoca rhoqo kunye nokutshintsha izinto zokulala
Ukuphucula inkonzo efunyanwa kwiinqwelo moya kunye nokuphelisa intlawulo ezininzi
Ukuphuhlisa iiyure ezisebenziseka lula kubahambi
Ukungazami ukuba zizinto zonke kubo bonke abantu.
Yenza ubuqili ngophuhliso lwemveliso. Yenza intengiso encinci kwaye unike ngaphezulu.
Ukuba ukhenketho luza kuphinda lubuye kwimeko yokungabikho kweshishini kunyaka ophelileyo onesiqingatha kuyakufuneka ufumane iindlela zokugqitha kulindelo kwaye ungaze ulibaxe ityala lakho. Eyona ndlela intle yokuthengisa yimveliso elungileyo kunye nenkonzo elungileyo. Umzi mveliso wezokhenketho kufuneka ubonelele ngento ethembisa ngamaxabiso asengqiqweni.
Icandelo lezokhenketho kufuneka lenze imeko-bume ekhuselekileyo nenokhuselo. Kunokubakho umlingo omncinci ukuba abantu bayoyika. Amashishini ajolise kubugqwirha kunye noluntu luyaqonda ukuba wonke umntu unendima ayidlalayo ekudaleni amava okhenketho aqinisekileyo kunye nalawo enza indawo eyodwa neyahlukileyo, ingeyiyo eyendwendwe kuphela kodwa neyamashishini okhenketho kunye noluntu.
Oktobha 22, 2021 kwi-09: 35